DHM: Boqolkiiba Annual 4.4 Number korodha Rakaabka Airline ee September ee Turkey | RayHaber | raillynews
HometareenkaDHM: Boqolkiiba Annual 4.4 Number korodha Rakaabka Airline ee September ee Turkey
06 / 10 / 2018 tareenka, GUUD, TURKEY
Agaasimaha Guud ee Hay'adda Maareynta Duulimaadka Gobolka (DHMI), 2018 diyaaradaha duulimaadka ee September, rakaabkii iyo tirakoobkii xamuulka ahaa ee lagu dhawaaqay.
Sidaa awgeed, 2018 bisha Sebtembar;
Duulimaadyada socdaalka iyo ka baxaya garoomada diyaaradaha waxay ahaayeen 5,2 oo leh hoos u dhac ku yimaada 79.813 ee duulimaadyada gudaha iyo 7,1 iyadoo la kordhinayo 68.009 duulimaadyada caalamiga ah marka la barbardhigo isla bishiiba sanadka hore.
Gaadiidka gawaarida ayaa kordhay 12,2% isla bishaas oo ay 43.051. Natiijadu waxay ahayd, wadarta gaadiidka hawada ee adeegga hawada waxay gaartay 2,6 iyadoo kordhisay% 190.873 oo kor u dhaaftay.
Garoomada guud ahaan Turkey this bisha gaadiidka rakaabka guriga hoos u 2,7 9.870.047%, halka gaadiidka rakaabka caalamiga ahaa% kordhay 12,1 10.897.477.
Sidaa daraadeed, wadarta gaadiidka rakaabka ee la socda rakaabka tooska ah ee bilaha la bixiyay waxay ahayd 4,4 oo kor u kacday 20.785.281% marka la barbardhigo isla bishiiba sanadka hore.
Gaadiidka maraakiibta (xamuulka, boostada iyo alaabta) gaadiidka; Laga soo bilaabo Sebtembar, 2,5 ayaa hoos u dhacay 90.335 khadadka gudaha, 11 ayaa kordhay 292.224 ee xarumaha caalamiga ah, 7,4 ayaa kor u kacay 382.559.
HAWLGALKA ISTANBUL ATATURK ISTANBUL SABIHA GAADIIDKA WADAMADA WELI SOCOTA
Gaadiidka rakaabka ee Istanbul Ataturk waxaa loo aqoonsaday 2 iyadoo la yareeyay 1.719.594 ee gudaha iyo 3 iyadoo la kordhinayo 4.414.781 ee khadka xawaaraha iyo 1 iyadoo la kordhinayo 6.134.375 khadka guud.
Gaadiidka rakaabka ee Istanbul Sabiha Gokcen Airport waxaa loo aqoonsaday 3 iyadoo la kordhinayo xNUMX ee gudaha iyo 1.992.563 iyadoo la kordhinayo 7 khadka xawaaraha iyo 1.083.797 iyadoo la kordhinayo 4 khadka dibedda.
Laga soo bilaabo Sebtembar, tirada rakaabka caalamiga ah ee ku yaala garoomada diyaaradaha, oo ku yaala xeebaha Aegean iyo Mediterranean Mediterranean (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) ayaa si aad ah u korodhay.
Gaadiidka caalamiga ah ee madaarka caalamiga ah ee Adnan Menderes ayaa kor u kacay 15% marka la barbardhigo isla bishaas sanadka hore waxaana loo aqoonsaday 371.826.
Gaadiidka caalamiga ah ee Gaadiidka Gawaarida ee Alanya ayaa ahaa 65 oo kor u kacay 98.539% marka la barbardhigo isla bishiiba sanadka hore.
Gaadiidka caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha ee Antalya ayaa kordhay 24% marka la barbardhigo isla bishaas sanadka hore waxaana loo aqoonsaday 3.665.837.
Gaadiidka caalamiga ah ee Mugla Milas-Bodrum ayaa ahaa 58 oo kor u kacay 261.543% marka la barbardhigo isla bishaan sanadka hore.
Gaadiidka caalamiga ah ee Mugla Dalaman ayaa kor u kacay 22% marka la barbardhigo isla bishaan sanadka hore waxaana loo aqoonsaday 493.668.
2018 Sanadka dhammaadka bisha Sebtember (9 bil kasta);
Wadarta gawaarida hawada (oo ay ku jiraan baaskiilada) waxay gaareen 6,7 iyadoo kor u kacday 1.551.749% marka la barbardhigo isla muddadiisii ​​sanadka hore, wadarta guud ee rakaabka (oo ay ku jiraan gaadiidka tooska ah) waxay kordheen 11,4 iyadoo kordhisay 163.987.652, xamuulka (Cargo + Mail + Baggage) gaareen 10,2 oo kor u kacay 2.909.660%.
Arslan: "Tirada rakaabku waxay gaareen heerka rikoodhka ee shabakadda dayuuradaha"
Waxyaabaha Vyksa Steel Works 'wax soo saarka gawaarida ayaa kor u qaada boqolkiiba 8
tabarruc ugu weyn in koritaanka gaadiidka hawada dalka Turkiga
3. Bandhigga Caalamiga ee Jidadka Wadooyinka, Kala Duwan iyo Tunneel
Safarkaaga safka 8 ee Newkapı-Hacıosman Metro waa mid raaxo leh